Chii chinonzi Pay-Per-Click Kushambadzira? Statistics Dzakakosha Dzakabatanidzwa! | Martech Zone
Mubvunzo wandichiri kubvunzwa nevaridzi vebhizimusi vakura ndewokuti vangaite here kana kuti kwete kubhadhara-per-click (PPC) kushambadzira kana kwete. Haisi yakapusa hongu kana kwete mubvunzo. PPC inopa inoshamisa mukana wekusundira kushambadza pamberi pevateereri pakutsvaga, zvemagariro, uye mawebhusaiti iwe aungasvike kazhinji kuburikidza nenzira dzehupenyu.
Chii chinonzi Pay Per Click Kushambadzira?
PPC inzira yekushambadzira pamhepo uko mushambadzi anobhadhara mubhadharo nguva yega yega kushambadza kwavo. Nekuti zvinoda kuti mushandisi atore matanho, iyi nzira yekushambadzira inozivikanwa. Vashambadziri vanogona kuwana mikana yePPC kumahara ekutsvaga, enhau enhau, uye yakawanda yemashambadziro ekushambadzira. Kusiyana neshambadziro dzechinyakare dzinobhadhariswa CPM (mutengo pamakumi ezviuru zvinowoneka), PPC mhosva neCPC (mutengo wega wega). Iyo CTR (tinya-kuburikidza chiyero) chikamu che kangani vashandisi vanodzvanya maringe nekuona PPC kushambadzira.
Unofanira kuita PPC? Zvakanaka, ndinokurudzira kukurudzira kuva nenheyo raibhurari yezvinyorwa uye Website nemabhero ese uye miridzo usati watanga kushandisa tani yemari kushambadziro. Kusarudzika, chokwadika, ndechekuti kana iwe usina chokwadi kuti ndezvipi zvirimo zvichaburitsa shanduko. Kuedza musanganiswa wezwi rakakosha uye kopi yekushambadzira muPCP inogona kukusererera toni yemari uye nguva yakashandiswa pane zvemukati kushambadzira kana iwe usina chokwadi.
Ini ndinowanzo kuraira vatengi kuti vatore saiti yekutanga, raibhurari yezviri mukati, mamwe mapeji makuru ekumhara, uye chirongwa cheemail… wobva washandisa PPC kuwedzera yako yakazara digitagi kushambadzira zano. Nekufamba kwenguva, iwe unogona kuvaka yako organic inotungamira uye shandisa PPC zvishoma kana iwe uchida iwo anotungamira.
Iyi infographic kubva SERPatch.io, Iyo Nyika yePay-Per-Dzvanya 2019, Inopa tani yeruzivo maererano nePPC indasitiri, mashandiro anoita zvikamu, uye inosanganisira gomo rezvokwadi rakabatana.
Kiyi PPC Statistics ye2019
Gore rapera, Kushandisa kweGoogle kushambadzira kushambadzira kwakakura 23%, kutenga kushambadzira kushambadzira kwakakura 32%, uye zvinyorwa kushambadzira kushambadzira kwakakura ne15%.
Around 45% emabhizimusi madiki vari kushandira mari muPPC kuti vakure mashandiro avo.
Zvinoenderana neGoogle kutsvagisa, kushambadzira kwekutsvaga kunogona wedzera brand kuziva ne80%.
Anotsigirwa kushambadzira anotora kusvika 2 kubva ku3 kudzvanya papeji rekutanga reGoogle.
Zviratidziro zveGoogle zvinosvika zvinopfuura 90% yevashandisi veInternet pasi pose.
Zvinoshamisa, 65% yevatengi vese tinya kuburikidza nekubatanidza kune chimwe chigadzirwa.
Mibairo yekutsvaga yakabhadharwa inoguma nepakati pe 1.5 nguva nguva dzekushandurwa yemakemikari ekutsvaga mhinduro.
In 2017, mafoni efoni yakaburitsa 55% yeGoogle yekutsvaga kushambadza.
70% yevanotsvaga nhare vanofona bhizinesi rakananga kubva kuGoogle Kutsvaga.
The avhareji tinya-kuburikidza chiyero pane yekutsvaga network ndeye 3.17%. Ivhareji CTR yeiyo yepamusoro yakabhadharwa mhedzisiro iri 8%!
Ive neshuwa yekutarisa iyo yese infographic pazasi kweanopfuura makumi masere emamwe manhamba!
Tags: mutengo pakubayactrmapc ads anosarudzwa seiyakabhadharwa kutsvagaakabhadhara kushambadzira munharaundakubhadhara pakukandappcppc kushambadziraserpwatch